Paartileen siyaasaa: 'Gareen Oromoo balleessuuf gurmaa'ee socho'u akka jiru hubanneerra' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Aanga'oota paartilee Oromoo haala yeroo irratti wayita ibsa kennan
Paartileen siyaasaa Oromoo shan gochaan magaala Burraayyuufi Finfinnee keessatti Oromoota irratti raawwatame kan isaan gaddisiise ta'uu himan.
"Gareen Oromoo balleessuuf gurmaa'ee socho'u akka jiru hubanneerra" jedhan. Paartileen siyaasaa tokko tokkos namoonni dhaadanoowwan "Oromoofi Nootummaan Naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee keessaa yaa bahan" jedhan qabatanii akka bahan godhaniiru.
"ESAT propogaandaafi olola maqaa balleessi Qeerroo irratti baneera" kan jedhan barreessaa Olaanaan KFO Obbo Baqqala Garbaa "miidiyichi Qeerroo bulguu fakkeessuun dhiyeessera" jedhaniiru.
Paartileen siyaasaa karaa nagaan dorgomuu hin barbaanne maallaqa sobaa namootaaf raabsuun okkara uumuufi mootummaan biyyattii bulchuu kan dadhabe fakkeessanii aangoo qabachuuf socho'aa akka jiranis Obbo Baqqalaan himaniiru.
"Namoota muraasaafi miidiyaa tokkoon biyyi yeroo diiggamu ilaaluu hin barbaadnu. Balaaleffachuu qofa osoo hin taanee namummaaf jennee uummata cinaa ni dhaabbanna."
Ibsa waliin baasan kanaan halleellaa qabeenyaa akka manneen barnootaa Afaan Oromoo, baankiiwwaniifi kollejjootarra ga'es balaaleffataniiru.
Sirna Federaalizimii rakkoo eenyummaa baroota dheeraaf Itoophiyaa keessa ture furuudhaaf diriirfame humnoonni dantaa hin qabne ka'umsi rakkoo kanaa federaalizimii akka ta'e mullisuudhaaf yaalii gochaa akka jiran ibsuudhaan ibsichi balaalleffateera.
Kanaaf, nuti paartileen Oromoo sochiin miidiyaalee dabalatee taasifamaa jiru kun balaa eenyummaa keenyarratti dhufe waan ta'eef cimsinee balaaleffanna, jedhaniiru.
''Iddoon har'a Finfinneen irra argamtu wiirtuu gosoota Oromoo Eekkaa, Gullallee fi Galaan durii akka ture kan haalu hinjru,'' kan jedhan dhaabbileen kunniin, gosoonni kunniin lafasaaniirraa humnaan buqqaafamaniiru jedhu.
Kanaafis jedhan, ''Finfinneen kaleessa, har'aa fi boruus qaama Oromiyaa fi bakka jireenyaa uummata Oromooti,'' jedhan.
MM Abiy Ahimad: "DhDUO'n falaasama haaraan dhufaa jira"
Oromiyaatti 'Imala qilleensarraa malee haleellaan qilleensarraa hin turre.'
Haleellaa shororkeessitootaa Naayiroobiitti
''Ajaajaa waraanaa Eliyaas Gaambellaa jedhamu hin qabnu''
ADWUI'n akka tokkummaa paartileetti jira jechuun danda'amaa?
Matta'aa $100m pirezidaantiif kaffalame
Waliigalteen 'Brexit' sagalee caalmaan kufe